Amniga & abaaraha oo hareeyay shirkii todobaadlaha ahaa ee xukuumada Puntland. – Radio Daljir
Amniga & abaaraha oo hareeyay shirkii todobaadlaha ahaa ee xukuumada Puntland.
Garowe, April 25 – Fadhigii toddobaadlaha ahaa ee golaha wasiirrada Puntland oo ay maanta oo Isniin ah iskugu yimaadeen ayaa waxa hareeyey si weynna looga dooday arrimaha nabad-galyada Puntland iyo abaarta xooggan ee ka taagan dhammaan gobollada.
Fadhiga oo ah mid ay Isniin walba wasiirradu yeesheen laguna falan-qeeyo arrimaha toddobaadkaasi taagan ayaa maanta waxaa ka soo xaadiray inta badan golaha xukuumadda Puntland, kuwaasi oo uu shir guddoominayey madaxweyne Cabdiraxaam Maxamed Maxamud ‘Faroole’.
Golaha ayaa si kulul uga wadahadlay xaaladaha nabad-galyo iyo midda ammaan ee dhammaan deegaannada Puntland iyagoo isla soo qaaday dhacdooyinkii ugu danbeeyey ee ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee Puntland siiba Galkacyo iyo Bossaso kuwaasi oo ay caado ka noqotay dilal qorshaysan ee lala bar-tilmaameedsanayo wax ku oolka bulshada gaar ahaanna nabaddoonnda iyo siyaasiyiinta magaca iyo maamuuska ku dhax-leh ummadda.
Wasiirradu waxay kulankooda maanta ku guddoonsadeen muqadasnimada adkaynta iyo xoojinta amniga Puntland iyagoo hoosta ka xarriiqay in la qaado tallaabo-kasta oo lagu kobcinayo nabad-galyada Puntland, loogana hortagi-karo falalka gurracan, gaadmada iyo shir-qoolidda hal-doorka ummadda.
Dhinaca kale golaha xukuumaddu waxay maanta iyana si baxaad leh uga wadahadleen xaaladaha abaareed ee saameeyey dhammaan deegaannada Puntland, waxaana golaha hortiisa laga soo jeediyey war-bixin ku saabsan baaxadda ay gaarsiisan tahay abaarta ka jirta Puntland taas oo ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah golaha wasiirrada oo xubno ka ah guddiga abaaraha Puntland dhawaanna socdaal kormeerid iyo u kuur-galid ah ku tagay dhul badan oo Puntland ah.
Markii shirka wasiirradu uu dhammaaday ayaan la xiriiray wasiirka hormarinta haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland Marwo Caasho Geelle Diiriye oo xubinna ka ah guddiga abaaraha Puntland, waxaana ay xustay goluhu in ay garawsadeen heerka ay gaarsiisan tahay abaarta iyo biyo la’aantu kaddibna la isla gartay in dawladdu ay sii waddo tallaabooyinka lagu caawinayo dadka tabaalaysan, dhanka kale la sameeyo abaabul heer gobolka ah oo ay dadku iskugu gargaarayaan.
Wasiir Caasho Geelle Diiriye, waxay u mahad-celisay dawladda, hay’adaha gargaarka, ganacsatada iyo culimo-awdiinka kuwaasi oo ay ku amaantay gacanta ay u fidiyeen walaalahooda dhibaataysan una soo jeedisay in ay sii wadaan hawlaha taakulayn, haseyeeshee dhanka kale waxay dhaliil dusha uga ridday qurba-jooga Puntland oo ay sheegtay in aysan qaadin wax tallaabo ah oo ay ku caawinayaan dadkooda marka laga reebo shillimaad yaryar oo ay eheladooda u soo diraan.
Kulanka wasiirrada ee maanta oo Isniin ah ay yeesheen uuna hareeyey ammaanka iyo oonka iyo abaarta ka taagan Puntland ayaa yimid xilli maalinba maalinta ka danbaysa siweyn looga cataabayo heerka abaarta iyo biyo la’aanta ay gaarsiisan tahay, waxaana uu dhanka kale ku soo beegmayaa wakhti iyana ay sii kordhayaan falalka amni-darro gaar ahaan dilalka qorshaysan kuwaasi oo uu ugu danbeeyey dilkii xalay loo gaystay alle ha u naxariistee nabaddoon Siciid Cumar Xasan.
Daljir Galkacyo. http://daljir.com/